सफल फिल्म कुर्दै मलिना, ‘लिला’ले राहत देला ?
कसैलाई एउटै फिल्मले स्टार बनाउँछ भने कतिलाई जति फिल्म गरेपनि सफलता मिल्दैन । झण्डै आधा दर्जन फिल्म गरेरपनि चर्चामा आउन नसकेकी एक नायिका हुन् मलिना जोशी । पूर्व मिस नेपाल समेत रहेकी मलिनाको फिल्म यात्रा सोचे जसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । डेब्यूदेखि उनी अभिनित फिल्म कुनैपनि हिट छैनन् ।
मलिनाले अभिनय गरेका कुनै पनि फिल्म सफल नहुनुले उनको करिअर अझै धरमराउँदो अवस्थामा छ भन्ने देखिन्छ । ‘ऋतु होस् या झुम्की’ नै किन नहोस्, दर्शकले उनलाई पत्याएनन् । यसै वर्ष उनी अभिनित फिल्म 'संरक्षण' पनि रिलिज भएको थियो तर हिट हुन सकेन । अब उनलाई आश र भर भनेकै दुई फिल्ममा छ । यही भाद्र ३० गते प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म 'लिला' र कात्तिक २ गते प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म 'रानी'माथि । यी दुई फिल्म सफल भए मलिनाको पनि हिट नायिका बन्ने सपना पूरा हुनेछ ।
यही भाद्र ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म 'लिला'बाट सफलता मिल्नेमा मलिना विश्वस्त छिन् । के, उनलाई ‘लिला’ले राहत देला ? यो भने हेर्न बाँकी छ । फिल्ममा मलिनाका अलावा राज कटुवाल, सञ्चिता लुइटेल, ध्रव कोइराला, निस्तोज निरौला, देवीराम पराजुली (भोकलाग्यो), पंकज नेपाल, स्वानीका बास्तोला, जेएन घिमिरे, यादव बैरागी र बालकलाकार प्रियंसु सिंह क्षेत्री लगायतको अभिनय रहेको छ ।